Wasiirka Caafimaadka Puntland oo ka warbixiyay Shir uu kaga Qayb-galay Kuwait – Radio Daljir
Oktoobar 16, 2015 6:41 b 0
Jimco, Oktoobar 16, 2015 (Daljir) —Wasiirka caafimaadka dawladda Puntland Dr Abdinasir Cismaan Cuuke oo ka qayb galay shir goboleedka Hay’adda Caafimaadka Adduunka EMRO/WHO) oo lagu qabtay Kuwait (Oktober 03-8) ayaa dhawaan ku soo laabatay Garowe.
Shirkaas oo ah mid sannad walba ay isugu yimaadaan Wasiirradda Caafimaad ka 22ka dawladood ee ka tirsan urur Goboleedka Hay’adda Caafimaadka Addunka.
Waxaa lagaga hadlaa horumarka laga gaaray sannadka laga soo gudbey hawlihaa caafimaadd ee waddamadaas iyo caqabadahay ay la kulmeen, isagoo sannad walba la go’aansho hawlo caafimaad oo waddan walba laga rabo in laga hirgeliyo, islamarkaana waxaa la soo bandhigaa wixii xirafado, iyo dawooyinka cusub ee lagu soo daro dawooyinka.
Wasiirka caafimaada Puntland iyo kan DFG Soomaaliya waxay la wadaageen xaaladda caafimaad ee Ummadda Somaliyeed ku sugantahay.
Shirku intuu socdey iyo maalmo kaddib, wasiirka caafimaadka Puntland wuxuu la kulmay Hay’ado Reer Kuwait ah oo Kheyri ah kuna hawllan gacan ka gaysiga caafimaadka, Wasiirku wuxuu soo bandhigay baahiyo uu hore u soo diyaarsaday ‘Waxayna u sameeyeen ballanqaadyo, ay ka mid yihiin dhismayaal rugo caafimaad oo dhowr ah, daawo , Ambulanceyo’ waxay kalo qaar kamid ah Hay’adahaas ballan qaadeen inay dhammaystiri doonaan hawlo ay hore u wadeen oo ay ka mid tahay Kulliyad soo saaridoonta saraakiil caafimaad ( clinical officers).
Cowke wuxuu kaloo booqday Safaaradda Somaaliyeed oo Safiirka iyo shaqaaluhu aad ugu soo dhaweeyeen,. Kana wada hadleen siday safaaraddu hawlahaas fududayntooda gacana uga geysan lahayd sidii hore loogaga bartay.
Wasiirku wuxuu u mahad celinayaa Jaaliyadda Somaliyeed ee reer Kuwait guud ahaan gaar ahaanna tan reer Puntland’ Safiirka Soomaaliyeed ee Kuwait iyo madaxdii Hay’adaha Kuwait oo uu la kulamay wakhtigooda qaaliga ahna u huray.